Tucano dia manolotra ny tranga vaovao amin'ny iPad Air | Vaovao IPhone
Tucano, marika malaza amin'ny tranga sy poketra ho an'ny takelaka, finday avo lenta ary solosaina, dia nanolotra ny karazany vaovao Fonon-tsimbadika namboarina tamin'ny famolavolana iPad Air vaovao. Manokana, nanolotra tolo-kevitra roa vaovao izy izay manome endrika tsara sy mahavariana, sady miaro ny fitaovanao amin'ny rangotra mety hianjera. Filo sy Angolo Izy ireo no fianakaviana vaovao misy fonony ho an'ny iPad Air, na dia manome toky aza ny mpanamboatra fa ho tonga ao amin'ny katalaoginy ny fanangonana hafa.
Filo dia sehatra fanta-daza, misy tranga ho an'ny iPad Mini sy iPhone. Ny fandraisana tsara nomen'ny mpampiasa ny fanangonana dia nisafidy ny mpanamboatra hanamboatra azy amin'ny iPad Air vaovao. Tranga misy karazana boky izy io, miaraka amin'ny fonony henjana mba hiarovana indrindra amin'ny efijery, ary azo atao ny mametraka ny takelaka Apple mitsivalana, mety amin'ny fijerena atiny multimedia. Anisan'izany ny raharaha ny rafitra mandeha ho azy sy ny switch-off, rehefa manokatra na manidy ny sarom-bilany, misaotra andriamby izay manampy ny sarom-baravarana hijanona rahefa voahidy. Hita amin'ny loko maitso, fuchsia ary mainty amin'ny € 39,90.
Ny angolo Angolo dia tena mitovy amin'ny iray teo aloha, miaraka amina endrika somary manify izay zara raha mampitombo ny hatevin'ny fitaovana rehefa mametraka ny fonosana fiarovana, fonosana eo anoloana mafy mba hampitomboana ny fiarovana, ary zoro mahaliana amin'ny fonony aforeto mba hanafahana ny fakantsary ary afaka maka sary na mirakitra horonantsary misokatra ny fonony, tsy apetraka eo aoriana ny fonony, manakana antsika tsy hanao izany, toy ny tranga misy amin'ity karazana ity. Hita amin'ny loko manga, fuchsia, maitso sy mainty, miaraka amin'ny vidiny € 34,90. Ny fonony dia efa misy amin'ny pejin'ny Tucano.
Fanazavana fanampiny - Akanjo ny iPad mini-hazo miaraka amin'ity fonony vaovao ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tucano dia manolotra ireo karazana tranga vaovao momba ny iPad Air
Space grey no loko malaza indrindra amin'ny iPhone 5s
Ny fahanterana na ny fanavaozana ao amin'ny iPhone 5c sy 5s